Hatramin’ny lefitry ny tompondaka aza dia mpilalao iray avy any Boany (Nantenaina Marcel Rabenirina) no mba hany hafa ligy tamin’izy ireo.
Tontosa omaly teny amin’ny kianjan’ny Asut Ankatso ny fiadiana izay ho tompondakan’i Madagasikara, teo amin’ny sokajy U8, U10, U12, U14, U16 ary U18 lahy sy vavy. Mbola voatanan’i Jean Jacques Rakotohasy ihany ny anaram-boninahitra teo amin’ny sokajy junior(latsaky ny 18 taona) tamin’ity taona ity. Tsy nahavaly azy fa lavony tamin’ny alalan’ny seta 2 no ho 0 (6/2, 6/2) i Solonantenaina Rakotoson, izay nifanadrina taminy teo amin’ny lalao famaranana omaly. Nandray ny amboarany faharoa ihany koa i Andriatoavina Ratsimandresy, izay efa nahazo izany teo amin’ny sokajy benjamin ary mbola nahazo ihany koa teo amin’ny sokajy minime.
Ligim-paritra enina(Analamanga, Boeny, Amoron’i Mania, Menabe, Antsinana ary Vakinakaratra) no nadray anjara tamin’io fifaninanam-pirenena ho an’ny tanora io. Hatreto aloha dia mbola tsy voafaritra ny fotoana hanaovana ny anjaran’ny sokajy zokiny, izay matetika herinandro aorizn’ny fahavitan’ny an’ny tanora no anaovana azy. Raha ny tsilian-tsofina dia amin’io volana septambra io no nangataha’ny mpanohana ny federasiona hanaovana izany saingy mbola tsy voatondro ny daty. Manahy ny fahatampohana ireo mpilalao tenisy malagasy amin’izao.